ယဉ်ကျေးမှု - Suzhou Ocan Polymer အမျိုးအစားပစ္စည်း Co. , Ltd မှ
ပေစာရွက် / Rolls
PVC စာရွက် / Rolls
Black က PVC
ရတဲ့အရာတွေ Black က PVC စာရွက် / လိပ်
Matt က Black PVC စာရွက် / လိပ်
Clear ကို PVC
Clear ကိုနှင်းခဲ PVC စာရွက်
Clear ကို PVC စာရွက် / Clear ကို PVC Roll
ရတဲ့အရာတွေအသွေးအရောင်စုံ PVC စာရွက် / လိပ်
Matt အသွေးအရောင်စုံ PVC စာရွက် / လိပ်
White က PVC
ရတဲ့အရာတွေ White က PVC စာရွက် / လိပ်
Matt White က PVC စာရွက် / လိပ်
ESD PVC စာရွက်
1. ကျွန်တော်တို့ရဲ့မစ်ရှင်: နည်းပညာနှင့်တကွအသက်ကိုပိုမိုကောင်းမွန်စေပါ, ပစ္စည်းစက်မှုလုပ်ငန်းများဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကိုမြှင့်တင်
ကော်ပိုရိတ်မစ်ရှင်လုပ်ငန်းတည်ရှိမှုနှင့်လုပ်ငန်းရှင်သန်ရပ်တည်ရေးနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေး၏အရေးပါမှု၏ရည်ရွယ်ချက်နှင့်အကြောင်းရင်းဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာယေဘုယျအားဖြင့်နောက်ဆုံးစက်မှုရည်မှန်းချက်နှင့်ဦးတည်ချက်တွေနဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတန်ဖိုးကိုဖော်ပြရန်အသုံးပြုသည်။ မြင့်မားသောပေါ်လီမာပစ္စည်းအပေါ်ပစ်မှတ်ထားကျွန်တော်တို့ရဲ့ကုမ္ပဏီအဓိကအား R & D နှင့်ပစ္စည်းထုတ်ကုန်များ၏အမျိုးမျိုးကုန်ထုတ်လုပ်မှုအတွက်ပါဝင်နေသည်လူအများ၏တိုးပွားလာပစ္စည်းများနှင့်ဘဝလိုအပ်ချက်များဖြည့်ဆည်း။ ပစ္စည်းစက်မှုလုပ်ငန်းအတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုကျိန်းသေတရုတ်ပစ္စည်းစက်မှုလုပ်ငန်းများဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကိုမြှင့်တင်ပါလိမ့်မယ်။ အဆိုပါအသုံးပြုသူများနှင့်စားသုံးသူသူတို့ကိုတိုက်ရိုက်သို့မဟုတ်သွယ်ဝိုက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ထုတ်ကုန်ကိုအသုံးပြုဖို့အဘို့မိမိတို့အသက်တာကိုပိုပြီးအဆင်ပြေပြေနဲ့ပိုကောင်းစေပါ။
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကုမ္ပဏီ၏လူမှုရေးအနေအထားအထိတန်ဖိုးထားလေးမြတ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ထုတ်ကုန်များနှင့်ကော်ပိုရိတ်ပုံရိပ်ကိုပိုမိုဆှဖှေဲ့နှင့်တက်ကြွဆောင်တတ်၏သော "ပစ္စည်းစက်မှုလုပ်ငန်းများဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကိုမြှင့်တင်တဲ့နည်းပညာတွေနဲ့ပိုကောင်းဘဝ Make" က visualization မှ abstraction ထံမှကော်ပိုရိတ်မစ်ရှင်ပါစေ။
2. ကျွန်ုပ်တို့၏မျှော်မှန်းချက်: စက်မှုလုပ်ငန်းအတွက်တစ်ဦးပထမဦးဆုံးအတန်းအစားအမျိုးသားရေးလုပ်ငန်းဖန်တီးပေးနှင့်ဦးဆောင်အမှတ်တံဆိပ်ဖြစ်လာစေရန်
ကော်ပိုရိတ်ရူပါရုံကိုဖွင့်မယ့်ရေရှည်အစီအစဉ်တစ်ခုအဆုံးစွန်ရည်မှန်းချက်ပင် high-profile ကိုအလားအလာနှင့်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကိုဦးတည်ချက်ဖြစ်ပါတယ်။ အကြောက်ကင်းရဲစွမ်းသတ္တိ, စိတ်ဝိညာဉ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့န်ထမ်းရှည်လျားသောခရီးအတွက်သတ္တိရှိရှိရှေ့ကိုချီတက်ဖို့အားပေးနေကြပါတယ်ဒါကြောင့်ပြင်းစွာသောအပြိုင်ဆိုင်မှုအတွက်ယိမ်းယိုင်အောင်မြင်မှုအောင်မြင်ရန်အနေနဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေအတွက်မဖြစ်မနေဖြစ်ပါတယ်။ ကျနော်တို့ပစ္စည်းလယ်ပြင်၌ဦးဆောင် ယူ. တရုတ်စီးပွားရေး၏တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအဖြစ်တရုတ်နိုင်ငံရဲ့အမျိုးသားရေးစက်မှုလုပ်ငန်းမြှင့်တင်ရန်ကြိုးစားကြသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ရူပါရုံကိုဖွင့်မယ့်ပထမဦးဆုံးအတန်းအစားအမျိုးသားရေးလုပ်ငန်းဖန်တီးပေးနှင့်စက်မှုလုပ်ငန်းများတွင်ဦးဆောင်အမှတ်တံဆိပ်ဖြစ်လာဖို့ဖြစ်ပါတယ်။
II ကို။ ကျွန်ုပ်တို့၏ဝိညာဉ်တော်သည်
ကော်ပိုရိတ်ဝိညာဉျကိုကော်ပိုရိတ်ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးနှင့်အတူခေတ်မီသတိပေါင်းစပ်အုပ်စုသည်ဝိညာဏ်တစ်မျိုးဖြစ်ပါသည်။ ဒါဟာမကြာခဏစုံစုံနှင့်ဒဿနဘာသာစကားများ၏ပုံစံအတွက်အကျဉ်းချုပ်နှင့်ကှကျကှကျကှငျးကှငျးစက်ရုံသီချင်း, စက်ရုံဆောင်ပုဒ်, စက်ရုံစည်းမျဉ်းများနှင့်စက်ရုံအထိမ်းအမှတ်ဖော်ပြနေသည်။ ယေဘုယျအားဖြင့်ဘုံသဘောထားကိုအဖြစ်ဖော်ပြ, လိမ့်မည်နှင့်ဝန်ထမ်း၏အားလုံးသို့မဟုတ်အများဆုံးအားဖြင့်မျှဝေစိတ်ဓာတ်, ကော်ပိုရိတ်ဝိညာဉျကိုဝန်ထမ်း၏စိတ်အားထက်သန်မှုကိုနှိုးဆှနှင့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ၏တက်ကြွအားကောင်းလာစေရန်နိုင်ပါတယ်။ ဝန်ထမ်းအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအစု၏လွှမ်းမိုးသဘောတရားအဖြစ်ကစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအတွက်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအတွေးအခေါ်, တန်ဖိုးကိုစံနှုန်းနှင့်စီမံခန့်ခွဲမှုအယူဝါဒ၏စိတ်နှလုံးမှာလည်းကော်ပိုရိတ်ယဉ်ကျေးမှု၏အုတ်မြစ်ဖြစ်ပါသည်။
စည်းလုံးညီညွှတ်ရေး & အခက်အခဲအကျပ်အတည်းများ, ရှေ့ဆောင် & ဆန်းသစ်တီထွင်မှု, အပျနှံ & ကျိန် ဆို. ပူဇော်, ယုံကြည်ရလောက်စစ်ဆင်ရေး
အရည်အသွေး & စွမ်းရည်, အပြန်အလှန်အကျိုးခံစားခွင့်, Excel ၏ကြိုးပမ်း, နောက်ဆုံးအကောင်အထည်ဖော်ရေး
No.68 Shiyang လမ်းမကြီးနယူး & နည်းပညာမြင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးကောင်စီခရိုင် Suzhou တရုတ်
ESD စူပါရှင်းရှင်းလင်းလင်း PVC စာရွက်ကဘာလဲ?